Ungazi njani ukuba ngubani onditsalela umnxeba ngenamba engaziwayo | Iindaba zeGajethi
Uninzi lwethu ngabasebenzisi abaphethwe ziifowuni ezivela kwiifowuni ezingaziwayo ngamaxesha e-nap, into yokuqala ekuseni okanye kungekudala ngaphambi kwe-10 ebusuku. Isizathu ayikho enye ngaphandle zama ukubamba umsebenzisi angasebenzi ukuze ndikwazi ukukunikezela, ngokubanzi, uthotho lweenkonzo.
Ngethamsanqa, kwiingxaki ezinjalo ezicaphukisayo, sinezinto ezahlukeneyo esinokukhetha kuzo ngohlobo lwezicelo, izicelo ezihambelana nezinye, ukuze sikwazi ukusebenzisa isicelo esinye ngaxeshanye. Apha siyakubonisa wazi njani ukuba ngubani ositsalela umnxeba ngenombolo engaziwayo.
Abasebenza ngefowuni, iiarhente zeinshurensi, zonke iintlobo zorhwebo ... nawuphi na umntu okanye inkampani inokuba semva kwenombolo yefowuni esingayaziyo. Abanye abasebenzisi bakhetha ukusika iilahleko zabo ngokungazi ukuba sithathe ezi ntlobo zeminxeba sazisa umngeneleli wethu ukuba angaphindi asibize, into ngelishwa engenzeki kwaye ngokuhamba kwexesha sifumana umnxeba omtsha.
2 Umntu ofowunayo nyani
3 Tsalela iBlocker
6 Isazisi seFowuni Pro
7 Vimba iifowuni ngaphandle kweapps
7.1 Vimba inombolo yefowuni kwi-iPhone
7.2 Vimba inombolo yefowuni kwi-Android
Nangona ingaziwa kangako kwimarike, iHiya yenye yazo Iinkqubo zokuchonga umnxeba ezipheleleyo nezilula ngakumbi Ukuphatha ukuba sinazo zombini i-iOS kunye ne-Android. IHiya iyasivumela ukuba senze kwaye sigcine uluhlu lwabamnyama lweenombolo zefowuni ezivaliweyo ukuze ngamaxesha onke zibenze njengogaxekile kwaye umnxeba awukhaleli kwisiphelo sethu okanye uphambukiselwe ngqo kwi-voicemail.
Ukuba naliphi na inani litsiba iapp, singayixela isicelo ukuze ube negalelo kwiziko ledatha kunye nabanye abasebenzisi. Ikwasivumela ukuba sichonge nayiphi na inombolo yefowuni, nditsho neSMS engekho kwi-ajenda yethu okanye efanayo, ngokubala amanani, kwabanye abakwirejista yesicelo. Olunye uncedo lwesi sicelo kukuba luhlaziya phantse yonke imihla ngalo lonke ixesha silivula, ke sinenombolo zefowuni ezintsha mihla le.
Hiya: Ukuchonga umnxeba kunye nokuVimba
Hiya: I-ID yomnxeba kunye ne-Spam blockerMahala
Umntu ofowunayo nyani
Oyena mntu ufowunayo uyafumaneka kwiinguqulelo ezimbini, ehlawulweyo ikwasivumela ukuba sibhale phantsi iifowuni (kuphela kuhlobo lwe-Android), ayibonisi iintengiso kwaye isivumela ukuba sicele ubunikazi ukuya kuthi ga kwiinombolo zeefowuni ezingaziwayo ezingama-30 ngenyanga. Nangona kunjalo, ngoguqulelo olukhululekileyo, sinabantu abangaphezulu kunabantu abaninzi esinokuthi sibasindise, njengoko isenza sikwazi ukubona phantse nayiphi na inombolo yefowuni esitsalelayo.
Kwakhona ivumela ukuba sibhloke ngokuthe ngqo kwiminxeba yogaxekile kunye nokuthengisa ngomnxeba ukongeza kwi-SMS, kwaye uvimbe iinombolo zomnxeba ngothotho. Ikwasinika neqonga lemiyalezo yokuncokola nabahlobo bethu, umsebenzi ongavakaliyo kwezi ndidi zezicelo. Ukuba i-smartphone yethu inee-SIM ezimbini, akukho ngxaki, kuba isicelo sisebenza ngayo nayiphi na ifowuni efunyenweyo, hayi ngomgca ophambili okanye wesibini wesiphelo.
Truecaller: ID kunye spam imiyalezo
Umthuthukisi: Umqhubi weloli
Esinye isicelo esihle esifumanekayo kuzo zombini i-Android kunye ne-iOS yokuthintela iifowuni zogaxekile, yiCall Blocker, isicelo esiza kukukhathalela ngokuzenzekelayo kuthintela zombini iifowuni kunye ne-SMS evela kwiinkampani ezibhalisiweyo kwiziko ledatha lakho. Ikwasinika ithuba lokujonga iinombolo zefowuni kwiziko ledatha okanye ukongeza ezitsha ukuba enye yazo ikwazile ukudlula kwifayile yesicelo.
Esi sicelo sisinika iinombolo zefowuni zombini zivela eSpain naseLatin America, ke ezinye iinkqubo azikhange zikuncede, mhlawumbi le iyenza. Ngaphakathi kukhetho loqwalaselo, iBlocker yokufowuna isivumela ukuba sibhlokhe nayiphi na inombolo yefowuni engekho kuluhlu lwethu loqhakamshelwano, iminxeba yamanye amazwe okanye zonke ezo mnxeba sizifumana ngamanani afihliweyo.
Tsalela umnxeba blocker-Block kunye nengxelo spam phones
Ukuba ujonga isicelo ayifuni uxhumano lwe-intanethi Ukuhlaziywa ngokuqhubekayo, i-Whoscall sisicelo osikhangelayo. Inedatha engaphezulu kwe-600 yezigidi zeenombolo zeefowuni ezichongiweyo njengogaxekile okanye ukuthengisa ngomnxeba. Njengazo zonke ezinye izicelo, iyasivumela ukuba sibhloke naluphi na uhlobo lomnxeba kunye neSMS yawo onke amanani afakiwe kwi-ajenda yesi sicelo.
I-Whoscall -I-ID yomnxeba kunye neBhloko
I-Whoscall -I-ID yomnxeba kunye neBhlokoMahala
I-CallApp ayisixhasi nje kuphela ukuba sikwazi ukwenza isicelo Chonga ngokukhawuleza iinombolo zefowuni ezithathwa njengogaxekile okanye ezinxulumene nokuthengisa ngomnxeba, kodwa ikwasivumela ukuba sibhale phantsi iifowuni, ukuze sibe novavanyo lomzimba ukuba siyalifuna nangaliphi na ixesha. Ngalo lonke ixesha sifumana umnxeba, igama lenkampani enxulunyaniswe nayo iya kuvela kwiscreen sesiphelo sethu, esiya kuthi sisivumele ukuba sikhawuleze sithathe isigqibo sokuba siyafuna ukuthatha umnxeba.
Ukurekhodwa komnxeba kusivumela ukuba sibhale phantsi zombini iifowuni ezingenayo neziphumayo kwaye wabelane ngokulula nabo kwisicelo. Esi sicelo sikwasivumela ukuba sihlale sigcina iinombolo zefowuni zonxibelelwano zethu zihlaziywa ngothungelwano olwahlukeneyo lwentlalo, ukudibanisa okunokwanela abanye ukukhetha esi sicelo.
Ngenxa yezithintelo ze-iOS, Esi sicelo sifumaneka kuphela ngaphakathi kwindalo ye-Android, apho kungekho ngxaki xa usebenzisa isicelo ukurekhoda iifowuni esizenzayo okanye esizifumanayo.
Umthuthukisi: Isazisi seCallApp Caller, Lawula kwaye wenze iiFowuni zakho ngokwezifiso
Isazisi seFowuni Pro
Sigqibezela ukudityaniswa kwezona zicelo zibalaseleyo zokuthintela iinombolo zefowuni ngeCaller ID Pro, isicelo esisebenza phantsi kobhaliso kwaye sigxile kubasebenzisi abafuna ukwazi ukuba ngubani obabiza ngalo lonke ixesha. Iziko ledatha leenombolo zefowuni ibonisa ukuba ihlaziywa imihla ngemihla.
Ngokumalunga nemisebenzi, i-ID yomntu osifowunayo Isinika imisebenzi efanayo naleyo sinokuyifumana nakusiphi na isicelo esithethe ngayo kweli nqaku. Ixabiso lokubhaliselwa lisusela kwi-10,49 ye-euro ngenyanga ukuya kwi-31,99 euro ngonyaka, ukuba sihlawula unyaka wonke. Ukuba sicacile ukuba esi sisicelo esisifunayo, sinokukhetha ukusebenzisa iphepha-mvume lokuphila elinamaxabiso ee-euro ezingama-54,99.
Isazisi seFowuni Pro ifumaneka kuphela kwizixhobo ezilawulwa yi-iOSOko kukuthi, i-iPhone kuphela kwaye ikhethekileyo. Okwangoku akukho nguqulo ifumanekayo ye-Android.
Vimba iifowuni ngaphandle kweapps
Ukuba asifuni ukusebenzisa ezi ntlobo zezicelo kwaye asinangxaki nokukhetha umnxeba ongaqhelekanga esiwufumanayo ngamaxesha angafanelekanga, sinokukhetha ukuyivala ngokuthe ngqo le nombolo ngokuthe ngqo kwisiphelo sethu, nokuba yi-iPhone okanye i-Android.
Vimba inombolo yefowuni kwi-iPhone
Kuqala siya kwifayile ye- ilog yokufowuna.
Emva koko, nqakraza kwi i leyo iboniswa ekupheleni kwenombolo yefowuni sifuna ukuvimba.
Kwiinkcukacha zaloo nombolo yefowuni sifumana ukhetho Thintela olu nxibelelwano.
Ngokucofa kolo khetho, i-iOS iya kuthi isazise ukuba nokanye asiyi kufumana fowuni okanye imiyalezo ebhaliweyo evela kulowo unxibelelana naye.
Vimba inombolo yefowuni kwi-Android
Ngaphakathi kwelog yokufowuna, kufuneka cofa kwinombolo yefowuni sifuna ukuvimba. Ukuba siyigcinile kwi-ajenda, cofa kwigama.
Xa ucinezela, imenyu iya kubonakala evumela ukuba: Thumela umyalezo, Block / uphawu njengogaxekile kunye neenkcukacha zomnxeba. Sinqakraza ukhetho lwesibini.
Okulandelayo, kufuneka nje qinisekisa ukuba sifuna ukuvimba elo nani ukuyeka ukufumana imiyalezo kunye neefowuni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Izicelo » Uyazi njani ukuba ngubani onditsalela umnxeba ngenamba engaziwayo